Igumbi elihle nelinoxolo ePlockton. - I-Airbnb
Igumbi elihle nelinoxolo ePlockton.
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguElizabeth
Igumbi elihle, elinoxolo eliphindwe kabini kwilali yase-Plockton, enombono omangalisayo ojonge i-loch. Iindwendwe ziya kuba nomgangatho wazo wabucala wendlu ukonwabela ukuhlala kwazo.
Isidlo sakusasa selizwekazi elibandakanya i-assortment yegranola kunye neesiriyeli, iyogathi, izonka ezitsha kunye neecroissants, iijam, ubusi, ibhotolo, ijusi yeziqhamo, ikofu, iti kunye nobisi ziya kunikezelwa.
Igumbi lokuhlambela labucala elinendlu yangasese, ishawa, ibhafu kunye nomzila wetawuli oshushu usecaleni kwegumbi lokulala. Iitawuli eziFluffy zinikezelwe.
Ukungena kuvela ngo-3pm ukuya ku-9pm. Ukuba ufika emva kwexesha, okanye ngenxa yesizathu esithile andifumaneki ukuba ndikwamkele, ndiya kushiya isitshixo kwisefu yesitshixo.
Ndinezilo-qabane ezibini ezinobubele nezamkelayo endlwini - inja enobubele nethambileyo ebizwa ngokuba nguBindi, kunye nekati enobuhlobo nenobubele ebizwa ngokuba nguBella. Baza kukugona kangangoko uthanda (kwaye banokuzama ukuchwechwa ebhedini yakho ukuba uyabavumela!), kodwa ukuba uyakwaliwa le asiyiyo i-Airbnb ekulungeleyo kuwe.
Ukuba ungathanda isidlo sakusasa phambi ko-7.30am, ndonwabe kakhulu ukunika iindwendwe ibhegi yakusasa equka ijusi, iicroissants, iyogathi, kunye neziqhamo.
Ikhitshi ayifumaneki ukusetyenziswa, kodwa kukho iketile, iimagi kunye ne-cutlery kwigumbi. Umatshini wokuhlamba kunye ne-tumble dryer ingasetyenziselwa i-£ 2 ngomthwalo ngamnye.
IPlockton yenye yezona lali zintle e-UK! Ilali yethu encinci yabantu abangama-350 idume ngokubukeka okuhle, ukutya kwaselwandle okumangalisayo, imithi 'yesundu', kunye nesetingi kaHamish MacBeth (edlala noRobert Carlisle).
Kukho umculo wesiNtu waseScottish kunye nowase-Ireland ubusuku obuninzi kwiindawo zokushicilela zasekhaya (iPlockton Inn kunye nePlockton Hotel), kunye nemisebenzi emininzi yangaphandle (i-kayaking, itywina lokuhamba ngezikhephe, ukuhamba intaba, ukunyuka amatye, ukukhwela ihashe, ukukhwela ibhayisekile entabeni...) apha nangaphaya. Sisiseko esihle sokuhlola indawo, kubandakanya iSkye ekumgama oziikhilomitha ezisi-7 nje. Indawo entle kakhulu impelaveki yothando okanye iholide yosapho.
Ndisebenza iintsuku ezininzi ukusuka ngo-9am ukuya ku-7pm ngoko ndiya kuba sendlini ngokuhlwa kuphela ixesha elininzi. Ndonwabile kakhulu ukunika iingcebiso zokuhamba, uhambo, iindawo zokutyela, uhambo lwemini njl njl kwiPlockton entle kunye neelali ezingaphaya!
Ndisebenza iintsuku ezininzi ukusuka ngo-9am ukuya ku-7pm ngoko ndiya kuba sendlini ngokuhlwa kuphela ixesha elininzi. Ndonwabile kakhulu ukunika iingcebiso zokuhamba, uhambo, iind…